Kaydka Sawirada – Page 4 – Shabakadda Amiirnuur
Beesha Shan-Gamaas oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa degaanka Kuunyobarrow ee gobolka Shabeelaha Hoose ku caleema saaratay Suldaan ay horey u doorteen. Xafladda caleema saarka oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qeyb galeen mas’uuliyiin, wax garad iyo marti sharaf kale ayaa si aad […]
DEG-DEG: 20 Askari Kenyan ah Oo Lagu dilay Weerar ka dhacay Laamu.
War kusoo dhacay warqabadka Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan waxa uu xaqiijinayaa in howlgal ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen gobolka Laamu lagu dilay ciidamo aad ubadan oo Kenyaati ah. Weerarka oo ahaa mid aad u qorsheysan waxaa kamiin loogu dhigay kolonyo ciidamo Kenyaati ah oo ku socdaalayay wadada isku xirta Kiyuunga […]
Sawirro: Barwaaqa Sooranka Beeraha Soomalaiya. (Qeybta 2-aad)
Gobollada Soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka islaamiga waxay dadku si wanaagsan uga faa’ideysanayaan nimcada roobka iyo biyaha webiga. Jubooyinka wuxuu kamid yahay gobollada ugu wax soo saarka badan dalka Soomaaliya, sawirro ayaan kasoo qaadnay qaabka ay dadku ugu faa’ideysanayaan tacabka iyo barwaaqada jirta.